Vaovao - Arahabaina amin'ny fanovàna 11kv & 33KV amin'izao fotoana izao sy ireo fanovana elektrika mandalo ny fitsapana KEMA
Miarahaba anao amin'ny fanovana «volt» 11kv & 33KV amin'izao fotoana izao sy ny fanovana «volt» mandalo ny fitsapana KEMA
KEMA no fanafohezana holandey (Keuring Van Elektrotechnische Materialen). Nivelatra tsikelikely ny sehatry ny orinasa KEMA, ary lasa fahefana mahaleo tena eo amin'ny sehatry ny serivisy angovo manerantany. Nandritra ny 80 taona mahery, KEMA dia nanampy ny mpanjifa haminany ny làlan'ny fanovana ary hamaha ireo olana sarotra amin'ny angovo sy ny fampiasana. Mitana andraikitra lehibe amin'ny fiantohana ny fisian, ny fahamendrehana, ny faharetana ary ny tombom-bolan'ny angovo eran-tany sy ny vokatra mifandraika amin'ny angovo.
Ao amin'ny tetikasa serivisy samihafa, ny KEMA dia mitana andraikitra amin'ny injeniera, consultant an'ny orinasa, manam-pahaizana momba ny fanovana sy ny fanovana. Manomboka amin'ny paikady sy drafitra ara-teknika, fitantanana ary mifehy ny rafitra ka hatramin'ny famolavolana injeniera, ny fanatanterahana sy ny fanombanana ny fanatanterahana ary ny fanombatombanana, sns. Sy ny indostrian'ny orinasa mba hanomezana vahaolana momba ny orinasa sy teknika.
Ny KEMA dia manana foibe any Arnhem, Netherlands, misy sampana any amin'ny firenena 20 manerantany. Nandritra ny valopolo taona mahery, ny kalitao, ny fahamendrehana, ny fahamendrehana ary ny fahalalana matihanina no soatoavin'ny KEMA.
ny Volana 11kv sy 33KV ary mpanova ankehitriny novokarin'ny orinasa mpanodina anay dia nandalo ny fitsapana KEMA ary nahazo ny tatitra momba ny fitsapana KEMA.
Mpanamboatra herinaratra any Shina izahay. Ka ny vokatray rehetra dia amboarina mafy amin'ny resaka ISO9001 & KEMA, ary manondrana kaontenera miisa 30 mahery izahay ary tena afa-po amin'ny kalitao sy ny serivisy aorian'ny fivarotana.
Raha mila izany ianao dia afaka mifandray aminay momba ny valin'ny fitsapana KEMA an'ny mpanova anay sy ny katalaogin'ny vokatra.
Manantena ny hifandray aminao izahay ary hiara-mandroso.
Fotoana fandefasana: Dec-30-2020